Aadan Dhoola Yare oo ku tilmaamay Ururka Cusub ee Hargaysa kagaga dhawaaqay mid aan sharci ahayn | Salaan Media
Aadan Dhoola Yare oo ku tilmaamay Ururka Cusub ee Hargaysa kagaga dhawaaqay mid aan sharci ahayn
July 13, 2013 | Published by: Hamse
July,13,2013,Hargeysa(SM)Wasiirkii hore ee Wasaaradda Caddaalada dawladdii hore Aadan Axmed Cilmi (Dhoolayare) ayaa dhaliilay urur ay dhawaan ku dhawaaqeen xubno iyo hogaamiyeyaashii ururradii doorashadii deegaanka ku hadhay.
Aadan Axmed Cilmi (Dhoolayare) oo soo saaray qoraal ayaa ku tilmaamay dhawaaqista ururkaas ay ku midoobeen xubnihii ku guul-daraystay hanashada hogaanka dalku inuu yahay sharci-darro, isla markaana aanu waadfaqsayn shuruucda dalka.
Waxa uu xusay in ururrada ku hadha doorashooyinka iyo masuuliyiintoodu uu sharcigu dhigayo inay ku biiraan xisbiyada soo baxay, isla markaana aanu jiri Karin urur madax-banaan.Qoraalkaasina waxa uu u qornaa sidan:-
“Marka hore waxaan umadda muslimiinta ah ku hambalyaynaya bisha barakaysan ee ramadaanta meel kasta oo ay joogaan Illaahayna waxaan uga baryayaa inuu inoo fudaydiyo, khayrkeedana ina waafajiyo.
Maan jeclayn inaan bisha barakaysan ka hadlo arrimaha siyaasadda, laakiin waxaa la inagu soo dhex tuuray urur aan la garanayn ujeedadiisa iyo waxa uu ka turjumaya iyo cidda uu ka wakiilka yahay.
Ururkaas oo loo bixiyay wada-tashiga, waxaa soo tuuray xilligan barakaysan shaydaan oo la sugi waayay ramadaanta inta ay dhamaanayso, kuna dhex abuuray ummadda muran iyo khal-khal halkii laga cibaadaysan lahaa.
Waxa ururkaas ku soo dhex tuuray ummadda niman siyaasiyiin ah oo la yaqaan, nasiib darro waxaa ku dhex milmay Guddoomiyaha xisbiga UCID oo ku qancin kari waayay inay xisbigiisa ku soo biiraan.
Haddii aynu dib u yara milicsano wakhtiga waxaa dhawaan ka dhacay wadanka doorshooyinkii dawladaha hoose, kuna tartameen todoba urur waxaana ka soo baxay saddex xisbi qaran . Anigu waxaan ka mid ahaa ururradii ku hadhay doorashada sida sharcigu yahayna ciddii doonaysa inay ku sii dhex jirto siyaasaddu waxaa waajib ah inay ku kala biiraan xisbiyada , haddaba nimankan odayaasha ah waxaynu ka war qabnaa inay lahaayeen ururradii ku hadhay doorashada qaarkoodna waxaabay ka mid ahaayeen kuwii ugu codka dheeraa tartankii madaxtinimada dalka 2010-kii. haddaba maanta oo aynu ku jirno maalmaha khayrka looma baahnayn inay ummadda ku soo dhex tuuraan waxaan sharciga waafaqsanayn.
Waxaynu leenahay dastuur sheegaya inuu wadanku leeyahay xisbiyo qaran, lagana soo fuuli karo salaanka siyaasadda.
Haddii aan dib ugu noqdo cinwaanka maqaalka ee ah aynu isku lug ahaano kala laab ahaano, waxay tahay nimankan siyaasiyiinta ah waxaynu ognahay inay ku heshiin waayeen inay wada furtaan urur qudha xilligii tartanka, waayo maantaba waxay haysan lahaayeen meel ay ka hadlaan oo ay wax ka badbaadshaan, haddii loo baahan yahay, waxaynu ognahay inay ku heshiin waayeen, taasina waa nin walba qumanihiisa ayaa qorta ugu jira , oo waa anigu aan taliyo.
Waxaa sal inoo ah dimuqraadiyad la isku doorto, haddaba ilama haboona in maanta ay raggaa odayaasha ahi iyagoo aan sharciyad u lahayn inagu soo dhex tuuraan urur aan meelnaba haysan.
Waxaan kula talin lahaa haddii ay siyaasadda rabaan inay xisbiyada ku biiraan, dabcan wuu jiri kara siyaasi madax banaan laakiin urur madax banaan maya. Waxaan ka hadlay siday iila muuqatay inuu yahay ururkani bulshaduna uma baahna ,waxaa jira saddex xisbi qaran oo dastuurku fasaxay, loomana baahna in la soo celiyo murankii xukuumadii Rayaale ee uu Gaboose soo dhigay ururro waa la furi karaa iyo lama furi karo waxay ila tahay inaynu ka gudubnay wakhtigaas.”